ओली सरकारको अर्को कडा कदम, सार्वजनिक बिदा कटौती गर्ने भन्दै गर्‍यो यस्तो कडा घोषणा ! – Nepal24News
काठमाडौं – गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक बिदा कटौती गर्न प्रस्ताव गरेको छ। धेरै दिन बिदा हुँदा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा असर परेको विश्लेषण गर्दे गृहले हालै दिइँदै आएको बिदामा २१ दिन कटौती गर्ने प्रस्ताव गरेको समाचार अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले लेखेको छ ।
Prevदेशले लोडसेडिङ तालिका अब कहिल्यै पाउदैन भन्दै कुलमानले गरे यस्तो घोषणा
Nextहोसियार ! तपाइको मृगौला भित्र पनि यस्तै होला ! शेयर गरि सबैलाई जानकारी दिनुहोस ! कसरि बच्ने ? थप जानकारी